Nambara ny valin'ny A' Design Award
Nambara ny mpandresy ny A' Design Awards
Ny loka iraisam-pirenena A' Design dia nanambara ny endrika tsara indrindra amin'ny taona amin'ny taranja famolavolana rehetra.
A' Design Award (http://www.designaward.com), ny mari-pankasitrahana iraisam-pirenena momba ny famolavolana izay mifehy ny World Design Rankings, dia nanambara ny valin'ny fifaninanana famolavolana farany.
A' Design Award dia nanambara endrika tsara an'arivony, vokatra voavolavola tsara ary tetikasa manentana fanahy ho mpandresy. Navoaka an-tserasera tao amin'ny lisitry ny mpandresy ny A' Design Award ny endrika nahazo loka vao haingana.
Nodinihina tamim-pitandremana ny fidirana amin'ny A' Design Award avy amin'ny tontolon'ny mpitsara lehibe manana fahefana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay nampivondrona ireo akademika malaza, mpanao gazety manana ny maha izy azy, manampahaizana manokana momba ny famolavolana ary mpandraharaha efa za-draharaha manerana an'izao tontolo izao.
Ny mpitsara A' Design Award dia nanokana ny fiheverana fatratra tamin'ny fanolorana sy ny antsipiriany momba ny tetikasa tsirairay. Ny fahalianana tamin'ny mari-pankasitrahana dia manerantany, miaraka amin'ny fanendrena avy amin'ny sehatra indostrialy lehibe rehetra, ary ny fidirana avy amin'ny firenena maro.
Ireo mpankafy ny famolavolana tsara sy ny mpanao gazety maneran-tany dia asaina am-pitiavana mba hahazo aingam-panahy amin'ny famolavolana vaovao sy hahita ny fironana farany amin'ny zavakanto, maritrano, famolavolana ary teknolojia amin'ny fitsidihana ny fampisehoana mpandresy amin'ny A' Design Award. Ny mpanao gazety sy ny mpankafy ny famolavolana dia hankafy ihany koa ny tafatafa ahitana ireo mpamorona nahazo loka.
Ny valin'ny fifaninanana A' Design dia ambara isan-taona amin'ny tapaky ny volana aprily, voalohany amin'ireo nahazo loka. Amin'ny tapaky ny volana Mey ny fampahafantarana ny voka-pifidianana ampahibemaso.
Ny vokatra, tetikasa ary serivisy tsara indrindra maneran-tany izay mampiseho endrika, teknolojia ary fahaiza-mamorona ambony dia mahazo valisoa amin'ny A' Design Award. Ny A' Design Award dia maneho ny hatsaran'ny famolavolana sy ny fanavaozana.
Misy ambaratonga dimy samihafa amin'ny fanavahana mari-pankasitrahana:
Platinum: Ny anaram-boninahitra Platinum A' Design Award dia omena amin'ny endrika tena tsara indrindra eran-tany izay mampiseho toetra tsara indrindra amin'ny famolavolana.
Volamena: Ny anaram-boninahitra volamena A' Design Award dia omena ireo endrika tsara indrindra eran-tany izay mampiseho toetra tsara indrindra amin'ny famolavolana.
Volafotsy: Ny anaram-boninahitra Silver A' Design Award dia omena ireo endrika tsara indrindra eran-tany izay mampiseho ny fahaiza-manaony ambony indrindra.
Bronze: Ny anaram-boninahitra Bronze A' Design Award dia omena ireo endrika tena tsara izay mampiseho ny fahaiza-manao amin'ny famolavolana.
Iron: Ny anaram-boninahitra Iron A' Design Award dia omena ireo endrika tsara izay mampiseho ny fahaiza-manao amin'ny famolavolana.
Ireo mpamorona, mpanakanto, mpanao mari-trano, trano fandrafetana, biraon'ny haitao, masoivoho famoronana, marika, orinasa ary andrim-panjakana avy amin'ny firenena rehetra dia antsoina isan-taona handray anjara amin'ny mari-pankasitrahana amin'ny fanolorana ny sanganasany, tetikasa ary vokatra tsara indrindra hodinihina amin'ny loka.
Ny A' Design Awards dia omena amin'ny sokajy fifaninanana tena midadasika, izay misy sokajy maromaro.
Ny sokajy A' Design Award dia azo atambatra amin'ny superset dimy:
Loka ho an'ny famolavolana habakabaka tsara: Ny sokajy mari-pankasitrahana spatial dia manaiky ny endrika tsara amin'ny maritrano, ny atitany, ny famolavolana an-tanàn-dehibe ary ny famolavolana tontolo.
Loka ho an'ny famolavolana indostrialy tsara: Ny sokajy loka ho an'ny famolavolana indostrialy dia manaiky ny endrika tsara amin'ny famolavolana vokatra, ny famolavolana fanaka, ny famolavolana jiro, ny famolavolana fitaovana, ny famolavolana fiara, ny famolavolana fonosana ary ny famolavolana milina.
Loka ho an'ny famolavolana fifandraisana tsara: Ny sokajy mari-pankasitrahana ho an'ny fifandraisana dia manaiky ireo endrika tsara amin'ny famolavolana sary, famolavolana fifandraisana, famolavolana lalao, zavakanto nomerika, sary, horonan-tsary, dokam-barotra ary famolavolana marketing.
Loka ho an'ny famolavolana lamaody tsara: Ny sokajy mari-pankasitrahana momba ny lamaody dia manaiky ireo endrika tsara amin'ny famolavolana firavaka, endrika fanampin-damaody, akanjo, kiraro ary famolavolana akanjo.
Loka ho an'ny Famolavolana Rafitra Tsara: Ny sokajy mari-pankasitrahana ho an'ny rafitra dia manaiky ireo endrika tsara amin'ny famolavolana serivisy, paikady famolavolana, famolavolana stratejika, famolavolana modely fandraharahana, kalitao ary fanavaozana.
Ireo nahazo mari-pankasitrahana dia asaina hanatrika ny alim-pandihizana mahafinaritra sy lanonana mari-pankasitrahana any Italia, izay hiantsoana azy ireo hankalaza ny fahombiazany ary hanangona ny amboarany, ny mari-pankasitrahana ary ny bokiny.
Ny endrika nahazo mari-pankasitrahana dia naseho bebe kokoa amin'ny fampirantiana famolavolana iraisam-pirenena any Italia. Ireo mpandresy amin'ny A' Design Award dia omena ny loka A' Design.
Ny Loka A' Design dia ahitana andiana serivisy momba ny fifandraisana amin'ny besinimaro, ny dokam-barotra ary ny fahazoan-dàlana hanampy amin'ny famoronana fankasitrahana sy fahatsiarovan-tena maneran-tany amin'ireo endrika tsara nahazo loka.
Ny loka A' Design dia ahitana ny fanomezan-dàlana ny A' Design Award Winner Logo ho an'ireo nahazo mari-pankasitrahana mba hanampy azy ireo hanavaka ny vokatra, tetikasa ary serivisy tsara amin'ny vokatra, tetikasa ary serivisy hafa eny an-tsena.
Ny loka A' Design dia ahitana fifandraisana iraisam-pirenena sy fiteny maro samihafa, dokam-barotra ary serivisy fampiroboroboana mba hanampiana ireo endrika nahazo mari-pankasitrahana hahazo fampirantiana maneran-tany, fivarotana ary fametrahana media.
Hetsika fanao isan-taona ny A' Design Award. Efa misokatra ny fidirana amin'ny andiany manaraka amin'ny A' Design Award sy Fifaninanana. Ny A' Design Award dia manaiky ny fidirana avy amin'ny firenena rehetra amin'ny indostria rehetra. Ireo antoko liana dia raisina an-tanan-droa hanendry endrika tsara hodinihina amin'ny loka ao amin'ny tranokalan'ny A' Design Award.
Ny lisitr'ireo mpikambana ao amin'ny mpitsara amin'izao fotoana izao, ny fepetra fanombanana ny famolavolana, ny fe-potoana amin'ny fifaninanana famolavolana, ny endrika fidirana amin'ny fifaninanana famolavolana ary ny torolàlana fanolorana ny mari-pankasitrahana dia azo alaina ao amin'ny tranokalan'ny A' Design Award.
Momba ny A' Design Awards
Ny A' Design Award dia manana tanjona philanthropic hampandrosoana ny fiarahamonina amin'ny endrika tsara. Ny A' Design Award dia mikendry ny hamorona fanentanana momba ny fomba fanao sy ny fitsipika tsara indrindra eran-tany, ary koa ny handrehitra sy hanome valisoa ny fahaiza-mamorona, ny hevitra tany am-boalohany ary ny famoronana hevitra amin'ny sehatra indostrialy rehetra.
Ny A' Design Award dia mikendry ny hanosehana ny sisin-tanin'ny siansa, ny famolavolana ary ny teknolojia amin'ny alàlan'ny fananganana fandrisihana matanjaka ho an'ny mpamorona, ny mpamorona ary ny marika manerantany mba hamoronana vokatra sy tetikasa ambony izay mahasoa ny fiarahamonina.
Ny A' Design Award dia manantena ny hampiroborobo ny vokatra sy tetikasa ambony izay manome lanja fanampiny, fampiasa bebe kokoa, fiasa vaovao, fanatsarana ny hatsarana, fahombiazana miavaka, faharetana tsara kokoa ary fampisehoana ambony kokoa.
Ny A' Design Award dia mikendry ny ho hery mitarika matanjaka amin'ny famoronana hoavy tsara kokoa miaraka amin'ny endrika tsara, ary izany no mahatonga ny A' Design Prize indrindra indrindra ahitana serivisy marobe hampiroboroboana ireo endrika tsara nomena.
Jereo ireo mpandresy tamin'ny A' Design Awards